OpenLibra: maktabadda bilaashka ah | Laga soo bilaabo Linux
OpenLibra waa degel ku dhalatay ka jawaab celinta baahida loo qabo adeegsadayaasha in qaab fudud lagu helo buugaag con shatiyada bilaashka ah mid ka badan mowduuc qeexayaa.
Boggu wuxuu ku siiyaa dadka soo booqda suurtagalnimada soo dejinta ama daawashada shaqada maktabadda si toos ah khadka tooska ah qaab PDF ah. Ma waxaad raadineysaa buug aad ku barato barnaamijka? Si aad wax badan uga barato SEO, suuqgeynta ama xayeysiinta? Buug kor loogu qaadayo awoodeena ciyaarta chess? OpenLibra hubaal waxaad ka heli doontaa waxaad raadineysay.
Waxyaabaha ku jira Isbaanishka iyo Ingiriisiga, faa'iidada OpenLibra ee ka beddelka kale ayaa ah in shaqada la hayo ay soo martay hanaan kala sooc ah, sidaa darteed waxaan heli doonnaa goob nadiif ah waxaanan lahaan doonnaa khibrad wanaagsan oo aan ku dhex mari doonno qaybaha kala duwan ee bogga oo aan ogaanno waxyaabo aad u xiiso badan nuxurka, oo aan uga heli karno bilaash maaddaama buugaagta oo dhami ay leeyihiin rukhsado u oggolaanaya taranka bilaashka ah iyo qaybinta isla.
Haddii aad hayso shaqo xiiso u yeelan kara diiradda goobta - oo qorsheyneysa inay ballaariso oo ay ku darto noocyo badan goor dhow - waad la xiriiri kartaa si buuggaagu ugu jiro OpenLibra. Tani waa halka qaabka ganacsiga ee maktabaddan bilaashka ah ay sidoo kale ku taal. Abuureyaashu waxay heshiis la gaari karaan goobta si ay u muujiyaan shaqadooda kuwa kale, iyaga oo siinaya meel doorbidid ah raadinta iyo bogga guriga ee goobta muddo cayiman.
Falsafadda bilaashka ah ee mashruuca ayaa la arkay, marka lagu daro nooca rukhsadaha ay ka kooban yihiin waxyaabaha la daabacay, API-kooda, kaas oo u oggolaanaya in mustaqbalka ay jiri karaan tiro badan oo ah mashaariic maktabad bilaash ah oo ku saleysan OpenLibra iyo in waxyaabaha ka soo maktabadahaan oo dhan waa laga heli karaa mid kasta oo ka mid ah.
OpenLibra waxay kubiirtay Mashruuca Gutenberg iyo mashaariic kale oo isla fikrad wadaag ah: in dhaqan iyo macluumaad bilaash ah lasiiyo adeegsadayaasheeda.
Haddii aad xiiseyneyso inaad waxbadan ka ogaato mashruuca, siyaabaha aad ula kaashan karto, adoo la wadaagaya waxyaabaha ama tarjumaadaha, waad booqan kartaa:
FurLibra @ http://www.etnassoft.com/biblioteca/
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Isticmaal FileLet » OpenLibra: maktabadda bilaashka ah
sifiican ayuu horey uugu galay 😛
Jawaab Juan Mendoza
Waxaan helayaa guuldarro inaan soo galo
Taasi waa sax ... waan ogolahay.
Taasi waa sababta aan ugu maleynayay inay muhiim tahay in la faafiyo.
Muddo dheer ayaan adeegsanayay waxaanan helay buugaag aad u faa'iido badan oo xiiso badan
Jaan goyn ah dijo
Mashruuc furan oo aad u wanaagsan, waxaan helay buugaag aad u wanaagsan oo in badan ii adeegay.
Ku soo jawaab Italia
Waxaan soo maray bogga runtiina wuxuu leeyahay qoraalo aad u xiiso badan, iyo waliba naqshad wanaagsan oo fiican.
Gelitaan weyn, aad baad ugu mahadsantahay xogta :).
Miquel Mayol iyo Tur dijo
Mahadsanid, ayaa kudaray akhristaha G-ga
Ku jawaab Miquel Mayol i Tur
Mashruuc Flash dijo
Buugaagta qaarkood ee aan halkaan ka helay wax badan ayey i caawiyeen waana in lagu bogaadiyaa dadaalka uu maamulku geliyay si uu u koro.
Ku jawaab Flashproyect